Jijiga: Qiimaynta Waxqabadka iyo Quudinta Shacabka UNHCR – Rasaasa News
Jijiga: Qiimaynta Waxqabadka iyo Quudinta Shacabka UNHCR
Feb 11, 2014 Jijiga: Qiimaynta, Quudinta, Shacabka, UNHCR, Waxqabadka iyo
Jijiga, Feb 11, 2014 – Waxaa dhawaan magaalada Jijiga ka bilowday kulanka qiimaynta lixda bilood ee xafiisyada heer degaan, kaas oo alaaba ka qabsooma degaanka Somalida Atoobiya.
Kulanka qiimaynta xafiisyada dawlada oo mudo hore ka bilowday degaanka Somalida, ayaa ah saddex biloodle, lix biloodle iyo sanadle. Ujdeedadka kulankani ku bolwday ama kaga hirgalay degaanka waxay ahayd shaandhaynta shaqaalaha dawlada ee xirriirka la leh Jabhada wadaniga Xoraynta Ogadeeniya [Jwxo]. Taas oo markii dambe gaadhay heer in shacabka la qiimeeyo.
Kulanka, ayaa xiliyadan dambe lagu magacaabaa kulanka qiimaynta waxqabadaka xafiisyada dawlada degaanka Somalida Atoobiya [KQWXDDSI]. Ujdeedada kulanka qiimaynta xiligan ayaa salka ku haysa Ragna shir lagama daayo, Lo,ona shiish barqo lagama daayo.
February 8, 2014, maalin ka dib ku soo laabashadii Jijiga, madaxwaynaha degaanka Somalida Atoobiya, waxaa bilowday kulanka qiimaynta waxqabadka xafiisyada dawlada degaanka Somalida Atoobiya.
Qabashada kulanka xiligan, ayaa ka gadisan kulamadii hore, waxaana loo qaybiyey xafiisyada dawlada afar horjooge oo shir gudoominaya shirarka socda.
Madaxwaye Cabdi, ayaa isagu muujinaya in uusan wax saamayn ah ku lahayn qiimaynta. Kulanka qiimaynta ka horna shir hor dhac ah oo uu la qaatay madax xafiiseedyada, ayuu ku dhiibay qodobada la xisaabtanka. Waxaa kale oo uu madaxwayne Cabdi shir la qaatay odayaal matalaya shacabka degaanka, isaga oo u sheegay in ay kala qayb qaataan kulanka qiimaynata waxqabadka xafiisyada dawlada degaanka Somalida Atoobiya. Taas oo aan hore u dhicin, saamayna ku lahayn kulanka qiimaynta. Kulanka odayada ayaa loogu yeedhay “shalayto shalay wixii dhacay” taas oo aan aad loo sharxin micnaha ka dambeeya.
Kulanka qiimaynta waxqabadka xafiisyada dawlada degaanka Somalida Atoobiya oo ka dhcaya afar dhisme, ayaa waxaa kala gudoominaya saddexda madaxwayne ku xigeen iyo madax xafiiseedka madaxtooyada.
Cabdulahi Yusuf Weerar, oo ah ku xigeenka kowaad ee Ismaamulka Somalida Itoobiya [ISI], ahna madax xafiiseedka nabadgaliyada iyo cadaalada, ayaa masuul ka ah qiimaynaya xafiiskiisa iyo dhawr xafiis oo kale
Cabdixakiin Cigaal Cumar, oo ah ku xigeenka 2aad ee Ismaamulka Somalida Itoobiya [ISI], ahna madax xafiiseedka dhismaha iyo horumarinta hawlaha guud, ayaa masuul ka ah qiimaynta xafiiskiisa iyo dhawr xafiis oo kale.
Cabdifataax Maxamed Xasan, oo ah ku xigeenka 3aad ee Ismaamulka Somalida Itoobiya [ISI], ahna madax xafiiseeska caafimaadka, ayaa masuul ka ah qiimaynta xafiiskiisa iyo dhawr xafiis oo kale.
Cabdicasiis Maxamed Xasan, oo ah madaxa xafiiseedka xafiisyada Ismaamulka Somalida Itoobiya [ISI], ayaa masuul ka ah qiimaynta dhawr xafiis oo uu kiisu ka mid yahay.
Qiimayntan oo sida la filayo ay ka soo bixi doonaan go,aamo; amaan, dhaliil iyo shaqo waayid, ay sabab u tahay qiimaynta shaqadu ayaan lagu eedayn doonin madaxwaynaha, balse afarta horjooge ee qiimaynta.
Dhinaca kale, waxaa xaqiiq ah in degaanka nabadi ku soo koradhay dhawrkii sano ee ugu dambeeyay. Waxaa kale oo la sheegaa in degaanka uu ka jiro horumar badan, arintaas oo aan sax ahayn. Marka laga reebo isbadalka dhaqaale ee ka jiraa magaalada Jijiga oo ah xidhiidh gancsi ee tooska ay ula leedahay Togwajaale ee xadka dalka Soomaaliya.
Laga soo bilaabo 2007, waxaa dadwaynaha degaanka Somalida Atoobiya quudisa UN-ta laanteeda UNHCR, taas oo u aamini wayday dawlada Atoobiya ilaalinta cuntada. Waxaa jira raashin bila ah oo ay qaataan dhamaan dadka degan degmooyinka iyo tuulooyinka degaanka Somalida. Dawlada Atoobiya waxay diiday in raashinka la siiyo dadka baahan laga ganacsado, iyada oo ilaalinaysa wax soo saarka dhulka sare Atoobiya. Arintaas oo sababtay in raashinku kaga jabnaado degmooyinka fog fog magaalada Jijiga. Dadwaynaha Somaliduna waxay ka quusteen beerashada dhulka, taas oo keentay in dhulkii la beeran jiray haatan wada qardoobay.
Kulanka qiimaynta waxqabadaka xafiisyada heer degaan oo hore loo qabtay bishii December, ka dib dabaal dagii [Hidhaar 29,2006 EC], ayaa haatan loogu talo galay indho saracaadka loo dhigayo dibad-joogta degaanka.